Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast Franck Kessie Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Franck Kessie Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye (Joelle), arsgbọ ala, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Worth.
Ọ bụ akụkọ ndụ dị mkpirikpi nke otu Ivorian onye dị ezigbo mma na midfield. Ihe omuma anyi banyere ya malitere site na nwata, rue mgbe obu onye a ma ama. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke ihe ndị dị ndụ, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya na ọganihu ọrụ ya.
Franck Kessie akụkọ ndụ.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya imechi egwuregwu na midfield ma tinye nrụgide na ndị mmegide. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ Franck Kessie, nke na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Franck Kessie Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido ebido, aha ya bụ Franky. Franck Yannick Kessié a mụrụ na 19th ụbọchị Disemba 1996 n'obodo Ouragahio na South Central Ivory Coast. Amuru ya na nne na nna ya, Mr na Mrs Kessie.
Ezigbo ezinụlọ Franck Kessie:
Onye na-egwu egwu bụ mba Ivor nke agbụrụ ojii. N'ezie, mgbọrọgwụ ezinụlọ ya gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na mba ọdịda anyanwụ Africa, bụ ebe obibi nke akụkọ ifo Didier Drogba. Ọzọkwa, ị maara na o nwere otu ebe ọmụmụ Serge Aurier? Ugbu a ị na-eme!
Maapụ nke gosipụtara obodo ọmụmụ Franck Kessie Ouragahio.
Afọ Franck Kessie Na-eto Eto:
You ma na Kessie nọrọ oge niile ọ bụ nwata n'obodo amụrụ ya na Ouragahio? N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ nwere nrọ nwata nke ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ ma jiri oge dị mma n'okporo ámá na ubi jiri bọl na ụkwụ ya.
A mụrụ onye ọkpụkpọ ahụ n'ezinụlọ dị n'etiti. N'ihi ya, o nwere ohere dabara adaba n'ihe ọ bụla ọ chọrọ ime. N'ụzọ dị mma, ọ họọrọ bọl na egwuregwu ahụ họrọkwa ya.
Egwuregwu bọọlụ bidoro maka Franck Kessie:
N'adịghị ka ozi na-ezighi ezi na-eme n'ịntanetị, Franky abụghị onye mechara bido bọọlụ. N'ezie, ọ nọrọ ọtụtụ afọ na-egwu egwu na ụrọ nke nhọrọ mpaghara, gụnyere Zady FC.
O nweghịdị okomoko nke igwu egwu na ahịhịa.
Agbanyeghị, enweghị ohere maka ọganihu ọrụ. Ya mere, ọ kwagara Abidjan ebe o sonyere Stella Club Adjamè. nke bu otu ndi otu ndi Ivorian siri ike n’oge ahu.
Afọ Franck Kessie Early na Career Football:
Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara na Franky malitere ọrụ ya na Stella dịka onye na-agbachitere etiti. N'ezie, ndị na-egwu egwuregwu si n'Atlanta hụrụ ya mgbe ha na-achọ onye na-agbachitere ya, ọ bụghị onye na-egwu egwu. Mgbe ọ rutere Atlanta, e kenyere Kessie na ndị otu klọb Primavera ebe ọ masịrị ya. N'ihe dị ka n'otu oge ahụ, Franky na-eme nnukwu ihe maka otu mba ya.
Hụ onye na-ebuli trophi tupu ya ekpuchi 17.
Franck Kessie Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Agbanyeghi na akpọrọ ndi ntorobịa ka ha buru ndi otu nke Nerazzurri, onweghi ohere obula ime ya onye izizi. N'ụzọ dị mma, ụlọ ọrụ ahụ gbaziri ya aka na Cesena na Serie-B, bụ ebe ọ bụghị nanị na ọ ghọrọ isi nkuku nke ìgwè ahụ kama ọ na-emegharị ka ọ bụrụ ebe ọhụụ dị ka onye na-egwu egwu.
Kwado ọrụ nke onye na-eme egwuregwu na-adịghị mfe na mbụ.
Franck Kessie Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Mgbe Franky mechara ihe dị ebube na Casena, ọ laghachiri na klọb nne na nna ya wee nwee mmalite ọkachamara. Ọ kwadoro ụlọ ọrụ ahụ tupu ọ kwaga AC Milan na 2017.
Kemgbe ọ bịarutere na Black na Red, Kessie gosipụtara na ọ bara uru penny ọ bụla klọb kwụrụ iji nweta ya. Dị ka ego, ọ na-eme ihe dị ka onye isi na AC Milan ebe ọ bụ onye isi oche nke ụlọ mgbakwasa na kicker kicker. Kedu ụzọ ọ bụla ihe si daba na ọrụ ya na-esote, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Franck Kessie Wife?
Franky abụghị onye ọbịa banyere ihe gbasara ịhụnanya na mkpakọrịta nwoke na nwanyị. N'ezie, o nweela ọtụtụ ihe egwuregwu na ụmụ nwanyị mara mma tupu ya ekekọta eriri ya. Aha nwunye ya bụ Joëlle. Anyị zukọtara na ya tolitere n'obodo Yopougon. N'ụzọ na-akpali mmasị, kpakpando bọl nọ na-edebe alụmdi na nwunye ha. Njikọ Kessie na Joelle gọziri nwa.
Nwunye Franck Kessie Joelle na nwa.
Ndụ ezinụlọ nke Franck Kessie:
Otu ụyọkọ Fans na ndị nwere mmasị maara Franky mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Agbanyeghị, enwere mmadụ ole na ole maara ya kemgbe a mụrụ ya. Ha bụ ezinụlọ. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Franck Kessie. Anyị ga-enyekwa nkọwa banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya Ebe a.
Banyere Franck Kessie Ndị nne na nna:
Papa Franky ji ndị ọkaibe bọọlụ tupu ọ bụrụ onye agha. N'ụzọ dị mwute, ọ nwụrụ n'ọrịa mgbe Kessie dị naanị afọ iri na otu. Ya mere, Franky na-ekele ekele n'ụdị agha mgbe ọ bụla ọ gụrụ akara iji cheta nna ya nwụrụ anwụ.
Anyị hụrụ nna ya ka ọ na-ekele ya ihe karịrị afọ iri.
N'aka nke ọzọ, ọ dịghị ihe ọmụma banyere mama ya. Ka o sina dị, anyị kwenyere na ọ bụ onye na-akwado. N’ezie, ị gaghị elegide Kessie anya ogologo ka ị ghọta na ọ na-echekwa ka nne na-eche ya nche.
Banyere ụmụnne nwanne Franck Kessie na ndị ikwu:
Site na nne na nna ya, Franky ekwughi na inwe nwanne nwoke ma obu nwanne. Kessie enyeghikwa ndị Fans ya na ndụ ezinụlọ ya, ọkachasị dịka ọ gbasara nne na nna ya na nne na nna ya. Ọzọkwa, anyị na-anụ ọkụ n'obi ịmara banyere nwanne nna ya, nwanne nna ya na ụmụ nwanne nne ya. Na mgbakwunye, ọ ga-abụ ụdị ya wepụta onwe ya ozi gbasara ụmụ nwanne ya na nwanne nne ya (ma ọ bụrụ na o nwere ụmụnne).
Franck Kessie Ndụ Nke Onwe:
Enwere okwu abụọ nwere ike ịkọwa mmadụ Franky. Nkume ma dị nro. Site na okwute, anyị na-ekwu na ọ bụ onye ọkachamara ọkachamara mgbe achọrọ ya. Nke a na-akọwa ihe kpatara na ọ kwụsịghị ịdị jụụ mgbe ọ dị ndị agbụrụ Inter na-akparị agbụrụ mgbe a na-emeri Milan derby. Ọ dịkwa obi ọmịiko, nwee ọgụgụ isi na ọchị. N'ezie, ọ dị mma ịkọwa kpakpando bọl na-enweghị mmụọ dị ka nwoke nke ihu igwe niile.
Anyị nzọ a oyiyi kwekọrọ na gị definition nke free-mmụọ nsọ.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka anyị mara na Kessie na-echekwa ndụ nke ya na nke onwe ya. Hụnanya ya maka iwepụta oge n'èzí ma soro ndị enyi / ndị ọrụ ibe nọrịa ekwesịghị ime ka ị nwee mgbagwoju anya maka onye nwere mmụọ zuru oke.
Ndụ Franck Kessie:
Ọ bụ ihe ịtụnanya na Franky bụ nnukwu onye mmeri. Ọ bụghị hyp, mana eziokwu. Karịsịa mgbe ị ghọtara na ụgwọ ọnwa ya kwa afọ ruru € 2.2m. A na - ekwu na kpakpando bọọlụ bara ọgaranya anaghị aga n’ihu na-egosi ọgaranya. Okwu a na-agbanye aka maka Kessie ebe ọ bụ na ọ naghị ebu ibu na ịkọwa ụgbọ ala ya. Onwebeghi ekpughere uda nke ulo / ulo o bi n'ime ya.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ dị obi umeala iji mee ka anyị hụ Audi ya.
Eziokwu Banyere Franck Kessie:
Iji mechie edemede a na akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ ihe amachaghị ma ọ bụ eziokwu banyere ya.
Kwa Afọ :: € 2,200,000.
Ọnwa kwa: € 183,333
Kwa Izu: € 42,242.
Kwa :bọchị: € 6,034.
Kwa elekere: € 251
Kemgbe ị malitere ilele nke Franck Kessie Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2 - FIFA 2021 Rating:
N'oge gara aga, anyị ga-adị mfe dere 78/82 fim dị ka mma. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ịnakwere ma kweta na ọkwa dị otu a adịghị mma maka Kessie. Kedu ka anyị ga-esi mee ka ndị na-anụ bọọlụ na-abịa n'ihu mara na ọgụgụ isi dị ka Kessie nwere aha dị otú ahụ na aha ya na 2021? Anyị nwere olile anya na nyocha elu nke ọnụego ya kwesịrị abịa ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya ya.
Nwere ike ịhụ ugbu a ihe kpatara anyị ji kwuo na o tosiri inweta ikike.
Eziokwu # 3 - Franck Kessie Religion:
Onye n’agba boolu n’Africa bu onye Kristian. Agbanyeghị, ọ nweghị nsogbu ọ bụla ya na ndị Alakụba na-eme mmemme n'oge ememme Alakụba. N'ezie, Kessie na otu onye otu na-emekọ ihe Hakan Çalhanoğlu kelee ya Fans Muslim na oge nke EidMubarak.
Lee Franky na onye otu Muslim ya na ya na eme ngwucha Ramadan n’otu.
Eziokwu # 4 - Mkpa nke No 11 Jersey:
Nọmba 11 dị ịrịba ama nye Kessie. Iji malite, a mụrụ ya na 11th, papa ya nwụrụ na 11th. Ọzọkwa, ọ bụ na 11th nke otu ọnwa ka Kessie rutere Europe mgbe ọ bịanyere aka na Atlanta.
Aha zuru ezu: Franck Yannick Kessié.
aha otutu: Franky.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 19 nke December 1996.
Ebe amụrụ onye: Obodo Ouragahio na South Central Ivory Coast.
Ogologo na cm: 183 cm.
Egwuregwu Ọnọdụ: Midfielder.
Enyi / nwunye ka: Joëlle
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a banyere akụkọ Franck Kessie na nwata na akụkọ ndụ ya. Anyị nwere olile anya na njem njem Franky si ọdịda anyanwụ Africa gaa Europe kwenyesiri ike na onye ọ bụla nwere ike imezu nrọ nwata.
Dị nnọọ ka Franck Kessie bụ onye na-enweghị mmasị na-egwu maka AC Milan n'oge ụbọchị George Weah. O mezuru nrọ ahụ nke yi AC Uwe elu Milan dị ka akpụkpọ anụ nke abụọ.
Ọ dị anyị mkpa ịja ndị nne na nna Franck Kessie mma maka ezigbo ọzụzụ ya. Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.